Umfundisi umthandazo sina kwakungewona funny | Apg29
Umfundisi umthandazo sina kwakungewona funny
Iphephandaba suku fun of umfundisi owafunda ifoni ngesikhathi ethandaza.
Imini zokuxhumana ukusakaza surfing umfundisi mobile ngenkathi wahola ibandla ngomthandazo. Ngibhale lutho ngakho ngoba ngacabanga ungqongqoshe angase afunde a bönämne ngenkathi ethandaza. kweqiniso kakhulu. Usuku ubhala e isihloko esisha:
- Kube umngane umfundisi Ohio onenkosikazi ezinomdlavuza, uthi Perry Stone.
- ngathatha ifoni yami Messa kuye.
Ngakho impendulo yakhe kubo bonke labo wacabanga ukuthi isimo kwamahlaya wukuthi kukhona okunjengolwandle kwamahlaya nhlobo nalo.
- Wenze fun yakho ngezindleko kwami ​​umfundisi enenkosikazi unomdlavuza.
Umfundisi uchaza e ividiyo ye-YouTube entsha.
Ngezinye izikhathi kufanele uthole izinto på¨varför kwenzekani hhayi iziphetho ngokuphamazela. Kungase kungabi njengoba kubonakala sengathi.
Usuku mhlawumbe uyena okufanele axolise?
Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi abantu abaseduze kwami ​​ziye kokubheduka nje ukuthi ngiye ngahlala e kumakhalekhukhwini wami. Kuye kwenzeka kabili ukuthi ngingathanda ngingene emotweni. Futhi ke mina surfed ngisho ngeselula noma wabheka kuwo. Kwanele ukuthi ngangingakwazi bese baphetha ngokuthi Ngingathanda igagasi noma ukuyibuka.
Noma ngabe siyini ngoba Angazi, kodwa mina ukusola ukuthi unomona ngenxa ibhulogi yami indawo apg29. Ngaphezu kokugeza uxhumene nabantu ngisebenzisa umakhalekhukhwini wami ukuvuselela kanye nomsebenzi on blog yami site. Omunye wabo wabe esecela ukuxolisa, omunye hhayi.
Manje kudingeka ungabi nomona. Ungase futhi uqale ibhulogi futhi basakaza lenkazimulo likaJesu Kristu!